सिपाडोलवासीलाई आँगनकै डोलेश्वर महादेव भए पराइ – indepth.com.np
सिपाडोलवासीलाई आँगनकै डोलेश्वर महादेव भए पराइ
रोशन धौभडेलको ‘मन दुख्यो’
SPECIAL इन डेफ्ट
यसकारण प्रधानमन्त्रीको पुनः शपथ आवश्यक (शपथको भिडियोसहित)
आज बिस्का जात्राको अन्तिम दिन : भैरवनाथको रथ भाँचिने खतरा !
SOCIAL SPECIAL TOURISM
भैरवनाथको रथ भताभुङ्ग
कोभिड १९ बीच नै बिस्का जात्रा सुरु : रथ तान्दा एकदर्जन घाइते
६७ रुपैयाँ ५० पैसा ज्यालामा भैरवनाथको रथ बनाउने नेतृत्व !
पीसीआर नेगेटिभ भएमात्रै स्वस्थानी व्रत बस्न पाउने
२१ फाल्गुन २०७५, मंगलवार ०८:४९
महाशिवरात्रीको दिन सोमबार डोलेश्वर महादेव मन्दिरमा लागेको दर्शनार्थीको घुइँचो । तस्बिरहरु : इन डेप्थ
भक्तपुर । भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका ८ सिपाडोलका राजु श्रेष्ठको आँगन अगाडि नै छ डोलेश्वर महादेव मन्दिर । उमेरले ५० कटेका उनले दिनहुँ डोलेश्वर महादेव मन्दिर पुगेर महादेवलाई ढोग्छन्, नमन गर्छन् र आस्था व्यक्त गर्छन् ।
सानो छँदा डोलेश्वर महादेव मन्दिर प्रांगण नै राजुलगायतका समकक्षीहरुलाई खेल्ने मैदान थियो । त्यहीं खेलेर हुर्केका राजुले अहिले त्यहीं डोलेश्वर महादेव मन्दिर प्रांगण पराई हुन्छ भन्ने सपनामा पनि सोचेका थिएनन् । डोलेश्वर महादेव मन्दिरको संरक्षण र विकासले फड्को मारिरहेका बेला उनले मन्दिरभित्रै प्रवेश पाउनबाट आफू बञ्चित हुनुपर्छ होला भन्ने चिताएका पनि थिएनन् तर सोमबार महाशिवरात्रीको दिन सपनामा पनि नसोचेको र कहिल्यै नचिताएको घटना घट्यो । उनी छांगाबाट खसेझैं भए ।
घरआँगनकै डोलेश्वर महादेव मन्दिर आफूहरुलाई पराई भएको टुलुटुलु हेर्नुपर्दा आफ्नो चित्त दुःखेको उनले सुनाए । सोमबार दिनभरि मन्दिर परिसर यताउता गरिरहे तर मन्दिरभित्र गएर डोलेश्वर महादेव मन्दिरको दर्शन गर्ने जाँगर पलाएन ।
सानो छँदा लुकी डुम खेलेर धेरैपटक त्यहीं मन्दिरभित्र लुकेका राजु सोमबार त्यहीं मन्दिरभित्रका डोलेश्वर महादेवबाट लुकी लुकी हिँड्न बाध्य भए ।
उनी मन्दिरभित्र गएर डोलेश्वर महादेव मन्दिरको दर्शन गर्न अनिच्छुक थिएनन् । सोमबार अरु दिनझैं महादेवको दर्शन र नमन् गर्न मन्दिरभित्र प्रवेश गर्न खोज्दा उनले प्रवेश पाएनन् । उनलाई मन्दिरको मूल प्रवेशद्वारमा बसेका स्वयम्सेवक युवायुवतीले छेके । स्वयम्सेवक युवायुवतीहरुले ‘ए दाइ ! कहाँ मन्दिर प्रवेश गर्न लाग्नुभएको ? लाइनमा आउनुस्’ भने ।
उनीहरुको यति भनाइ खाएपछि उनी फरक्क फर्किएर आए र दोहो¥याएर मन्दिरमा गएनन् । पेसाले कानुन व्यवसायी राजु डोलेश्वर महादेव संरक्षण तथा विकास समितिका तीन वर्षअघि भएको निर्वाचनका बेला प्रमुख निर्वाचन अधिकृत थिए । साथै उनी उक्त समितिका आजीव सदस्यसमेत हुन् । उनैले सहज रुपमा मन्दिर प्रवेश पाएनन् ।
आफ्नै घरआँगनको डोलेश्वर महादेव मन्दिरमा सहज प्रवेश नपाउने राजु श्रेष्ठ प्रतिनिधि पात्रमात्रै हुन् । उनीजस्ता सयौंले सोमबार अघिपछि जस्तो सहज रुपमा मन्दिरभित्र प्रवेश पाएनन् ।
एक त सोमबार महाशिवरात्री । बिहान ४ बजेदेखि मन्दिरमा भक्तजनको घुइँचो लागेको थियो । समितिले महाशिवरात्रीको दिन सर्वसाधारणलाई महादेवको पूजा गर्न गर्भगृहसम्मै पुग्न दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले सोमबार डोलेश्वर महादेव मन्दिरको दर्शन र पूजाआजा गर्नेहरुको घुइँचो अरु दिनभन्दा बढी हुने स्वाभाविकै थियो ।
त्यसमाथि समितिले स्थानीयलाई छाडेर भक्तपुर नपा ९ च्याम्हासिंहस्थित सूर्य नेपाल फाउन्डेसनलाई स्वयम्सेवकको जिम्मा दिएपछि आँगनमै मन्दिर भएका सयौं सिपाडोलवासीले मन्दिर प्रवेश पाएनन् ।
‘स्वयम्सेवक बसेकाहरुले आफूले चिनेजानेसम्मका सबैलाई सहजै मन्दिर प्रवेश दिए’, अर्का स्थानीय दीपेश थापाले गुनासो गरे, ‘तर हामी स्थानीयले नै मन्दिर प्रवेश पाएनौं ।’
स्थानीय नै पराई बन्नुपरेको यो पहिलो घटना भएको उनले सुनाए ।
करिब २५ हजार दर्शनार्थी पुगे
सोमबार डोलेश्वर महादेव मन्दिरमा महाशिवरात्री मेला भर्न करिब २५ हजार दर्शनार्थी पुगेको समितिका सचिव विश्वराम थापाले जानकारी दिए । मन्दिर पुगेका दर्शनार्थीको सुविधाको लागि मन्दिरका चार ढोकामध्ये तीन ढोका खुला गरिएको थियो । पूर्व र पश्चिमका ढोकाबाट मन्दिर प्रवेश र दक्षिण ढोकाबाट बाहिरिने व्यवस्था गरिएको थियो ।
उनका अनुसार बिहान ४ बजेदेखि बेलुका ४ बजेसम्म एकैनासले दर्शनार्थीहरुको आगमन भइरहेको थियो ।
उनले स्वयम्सेवकमा बस्नेहरुको कमजोरीले धेरैजसो दर्शनार्थीले मन्दिरभित्र सहज प्रवेश नपाएको बढी गुनासो आएको स्वीकार गरे ।
हजारौंको भीडमा सबै व्यवस्थित गर्न नसकिने भन्दै उनले आगामी दिनमा त्यसलाई सच्याइने बताए ।
करिब दुईसय पचास साधुसन्त
समितिका कोषाध्यक्ष मोहन बल्लका अनुसार मन्दिरमा करिब दुई सय पचास साधुसन्त महाशिवरात्री भर्न पुगेका छन् । मन्दिर परिसरमा पुगेका साधुसन्तले खुलमखुला गाजा तानिरहेका थिए । कोहीकोही साधुसन्त भक्तजनको लागि चिलिम र चुरोटमा गाजा भरिरहेका थिए । आफू पनि गाजा तान्दै भक्तजनलाई पनि तान्न दिइरहेको दृश्य सबैतिर देखिन्थ्यो ।
मन्दिर पुगेका साधुसन्तहरुलाई मंगलबार दक्षिणासहित बिदाई गरिने समितिका उपकोषाध्यक्ष हरिशरण बस्नेतले जानकारी दिए ।
आयो भाजु पुखुबारे नयाँ तथ्य
गंगा लिगललाई सिर्जना अभियान सम्मान